राजधानीको विषयमा खुसीको खवर, कसैले चिन्ता लिनु नपर्ने - TV Annapurna
January 18, 2018 January 25, 2018 Annapurna TV
प्रदेश राजधानी र प्रदेश प्रमुखका टुंगो लगाईसकेपछि लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोध पनि करिब करिब अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेशसभा गठन सरकार गठन लगायतका कामले गतिशिलता पाउने भएका छन् । यो सँगै नेपालमा अब संघीयताको कार्यन्वयन सुरु भइसकेको छ । अहिले तोकिएका राजधानी त अस्थाई नै हुन् तर प्रदेश प्रमुखको विषयमा भने स्पष्ट कानुन नहुँदा अबको सरकारको हातमा निर्भर रहन्छ । किनभने यदी चाह्यो भने प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याएर बर्खास्त पनि गर्न सक्छ । प्रदेश राजधानी तोकिएसँगै ठाउँठाउँमा दीपावली सुरु भएको छ र सरकारको निर्णयको भव्यताका साथ स्वागत गरिएको छ । यद्यपि त्यत्ति बढी खुसीयाली मनाउनुपर्ने अवस्था भने होइन । अर्कोतीर आफुले चाहेका ठाउँमा राजधानी तोकिएन भनेर आक्रोस व्यक्त गर्ने र अनिश्चितकालिन बन्द सम्मका कार्य गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको समेत पुत्ला जलाउनु निकै दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो कदम आवश्यक थिएन । हामी नेपाली जनताको सोच्ने स्तर अब फराकिलो हुनु जरुरी छ । हामी वास्तविकता बुझ्नुभन्दा लहैलहै र हल्लाका भरमा दौडिने गर्दछौ । हामी सचेत र आदर्श नागरिक बनेर कहिल्यै बस्न सकेनौ । यो कुराको अर्थ यो होइन कि हामी केही पनि कुराको विरुद्धमा आउनुहुदैन सरकारका हरेक निर्णय चुपचाप स्वीकार्नुपर्छ ।
मैले उठाउन खोजेको विषय यो हो कि हामी जुन कुराको विरोध र समर्थन गर्छौ त्यसप्रतिको वास्तविकता बुझ्ने गरौँ । यो कुरा किन उठाइयो भने अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानाकारी गराउन । जसरी प्रदेशको राजधानी तोकेर सरकारले ढिलै भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरेको छ । र वास्तवमा यी राजधानी भनेका केही समयका लागि मात्र हुन् । पछि प्रदेशसभाको गठन भएपछि प्रदेशसभाका दुइतिहाई सदस्यको निर्णयबाट निर्धारित हुने विषय हो यो अहिलेको विवाद र बहसको विषय होइन । यो कुरा स्वभाविक हो कि हामी आफु बसेको ठाउँबाट नजिक राजधानी भयो भने आवतजावत गर्न सहज पर्छ साथै अन्य धेरै कुरामा सहज हुन्छ । तर त्यो चाहना त प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक जनताको नै हुने गर्छ । हामीलाई त सुविधा भयो तर अर्को ठाउँका जनतालाई सहज भएन भने पनि त्यहाँ पनि त समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो मात्र अनुकुल हुने तर अर्काको भावनाको कदर नै नहुने माग राखियो भने त्यो कसरी पूरा हुन सक्छ ? अब हामी यी कुरामा पनि ध्यान लगाउन जरुरी छ ।
सबैले भनेजस्तो त कहि कतै पनि हुँदैन तर सबैलाई समग्रमा सहज हुने खालको भने गर्न सकिन्छ । तसर्थ हाम्रा कतिपय सवालहरु मननीय पनि छन् । तर जुन अहिले राजधानीको विषयमा अनावश्यक हल्ला र आक्रोस भइरहेको छ । यो निकै मुर्खतापूर्ण काम हो । किनकी यो भनेको कामचलाउको लागि तोकिएको हो । अहिले जहाँसुकै तोकिएपनि त्यसलाई उल्टाउने सल्टाउने अधिकार पूर्ण रुपमा प्रदेश सभालाई छ । यो जान्दाजान्दै पनि आन्दोलनमा उत्रेर सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असहजता उत्पन्न गर्नु हाम्रो गल्ती हो । यस विषयमा अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने जनतामात्र नभएर त्यहाँका नेताहरु समेतले अस्वभाविक प्रतिकृया जनाएका छन् । नेताको काम त जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु पनि त हो । यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताले पनि फराकिलो छाती बनाएर सोच्नुपर्छ । साथै एक ठाउँका जनताको प्रतिनिधित्व गरे पनि अरु ठाउँका जनताको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नु राजनेताको दायित्व हो । प्रदेश राजधानी ७ ओटा मात्र बन्छन् जहाँसुकै राजधानी गराउन त प्र्रदेश पनि थप्नुपर्छ । यस विषयको निर्णय गर्दा पछि प्रदेश सभाले निर्णय गर्छ । जनता र नेताहरु सचेत सजग र शान्त हुनु जरुरी छ ।
राजनीति, सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार
सार्वजनिक विदा दिएपनि आज सोनाम ल्होसार नमनाइने
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले डा। गोविन्द केसीका माग पूरा गर्नैपर्ने बताएका छन् । यसअघि...
केसीलाई भेट्न देउवा शिक्षण अस्पताल जाँदै
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा। गोविन्द केसीलाई शुक्रवार भेट्दै छन् । केसीलाई भेट्न...
तालिवानी शैलीमा आक्रमण भएको मन्त्री बास्कोटाको आरोप
सरकारका प्रबक्ता एबम संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जुम्लामा प्रहरीमाथि तालिवानी शैलीमा आक्रमण भएको...
विवेकशिल साझाले दियो कांग्रेसलाई चुनौती
विवेकशील साझा पार्टीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको...
कांग्रेसले थाल्यो सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रा. डा.गोविन्द केसीको मागसहितका विषयमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेको छ ।सभापति शेरबहादुर देउवाले...
प्रधानमन्त्री निवास कि पार्टी मुख्यालय हो बालुवाटार
तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिको पहिलो...
मिल्यो देउवा-पौडेल विवाद, संसोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति बन्ने
नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको आन्तरिक विवाद मिलेको छ ।सरकारविरुद्धको गतिविधिमा...
July 18, 2018 TV-Annapurna 0
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बुधबार राति भएको आकस्मिक बैठकले जुम्लामा १९ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द...
धर्मनिरपेक्षता खारेजी नभए कडा रुपमा जनसंघर्ष गर्ने कमल थापाको चेतावनी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता खारेजी नभए कडा रुपमा जनसंघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको...
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा राजपा
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । सो पार्टीको बुधबार...
इन्टरनेटमा कर बढाएको भन्दै नेविसंघ धर्नामा
सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले बिरोध जनाएको । इन्टरनेटमा लगाइएको कर...
अझै रोकिएन विमानस्थलमा सुन तस्करी
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको क्रम अझै रोकिएको छैन् । ठूलो परिणामको सुन तस्करी...
यस्ता छन् सरकारमाथि लगाइएका कांग्रेसका १५ आरोप
कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी र जनविरोधीको संज्ञा दिँदै १५ वटा आरोप लगाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको भावना...
यसकारण कर्मचारी फर्काउन सरकार बाध्य
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउनु भनेको...
कार्यालय खारेजपछि कर्मचारीमा अन्योल
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीहरुमा अन्योलता छाएको छ।...
राजनीतिक नियुक्ती बदर गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो
अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरुलाई सरकारको वदर गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टइए दिएको छ ।...
July 17, 2018 Annapurna TV 0
नेविसंघको प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठी चार्ज, अध्यक्ष महरसहित केही नेता घाइते
नेपाल विद्यार्थी संघको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ । सरकारको विरोध गर्दै नेविसंघले मंगलबार...
यो सरकार कसैले हल्लाएर हल्लिँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार देशलाई सही बाटोमा हिडाउन लागेकाले कसैले कसैले हल्लाएर नहल्लिँने बताएका छन्।मंगलबार...
ओलीलाई देउवाको चेतावनी अब विरोधको सामना गर्न तयार हुनुस्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार भेटेका छन् ।जुम्लालामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द...
नेकपाको विधानमा यस्तो व्यवस्था, ओली प्रचण्ड गाउँ जानु पर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन...